musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Smart TV Inopa Nyowani Filmmaker Mode
Kutanga svondo rino, LG inotanga kuburitsa dhizaini inogonesa vese LG 2020 uye 2021 4K uye K HUD Smart TV vatengi pasi rese kuti vakwanise kuona mabhaisikopo uye nhepfenyuro paPrime Vhidhiyo muFilmmaker Mode ™, zvichivabvumira kuona. ziva nzira iyo vagadziri vezvinyorwa vakazvironga.
Filmmaker Mode yakagadzirwa neHUD Alliance, inoumbwa nevanotungamira pasi rose vagadziri vemagetsi evatengi, mafirimu neterevhizheni masitudiyo, vanogovera zvemukati uye makambani etekinoroji, vachitsvaga kuona yakanakisa HUD yekuona zviitiko. Kekutanga yakavhurwa muna 2019 uye inoratidzwa muLG TVs muna 2020, Filmmaker Mode yakagadzirirwa kuchengetedza zvinoonekwa zvemugadziri wemukati, zvichiunza chiitiko chekuona pamba padhuze sezvinobvira kune iyo yekuburitswa chaiko.
LG neAmazon zvino tora chiono icho nhanho mberi nePrime Vhidhiyo zvemukati zvakamisikidzwa nechiratidzo chinokonzeresa otomatiki Filmmaker Mode pa4K uye K HUD LG TV modhi inomhanya webs 5.0 uye webs 6.0. Uku kugona kwemaTV anowirirana kuona uye kugadzirisa marongero kuFilmmaker Mode pasina chikonzero chekuti muoni achinje marongero pamaoko iindasitiri kutanga uye inovhura nzira yemangwana maTV kuti atsigire zvirinani masevhisi ekutepfenyura pasina kuisa mamwe matanho kune vanoona.
Nepo maficha ekugadzirisa mapikicha akadai sekufamba kutsvedzerera uye kurodza mufananidzo kwakanakira akawanda mafomu emukati zvinosanganisira mitambo neTV, dzimwe nguva vanogona kuita kuti mafirimu emhando aite seakapfava uye akanyanyogadziriswa. Filmmaker Mode inodzima chero marongero ekugadzirisa mapikicha ayo anogona kuita kuti mafirimu anzwe asiri emusikirwo uye kuita kuti varatidze zvakasiyana nemadireta avo angade uku vachichengeta chiyero chepakutanga chefirimu, mavara uye furemu chiyero chechiitiko chechokwadi. Yakasanganiswa nevatema vakadzama, kukwidziridzwa kusiyanisa uye kupenya kwemavara eLeg's advanced TV, vataridzi vanowana kudzika kusingaenzaniswi uye realism kuburikidza nePrime Video sarudzo yakakura yemamuvhi uye akateedzana, kusanganisira maAmazon Originals akadai saThe Marvellous Mai Mussel, The Boys, The Mangwana Hondo uye iyo inotarisirwa zvikuru inouya yakatevedzana The Wheel of Time premiering November 19. Kamwe-tinya kupinda Prime Video app inopiwa ne hot key paLeg's Magic Remote.
Pamusoro pemhando yemhando yemifananidzo, Leg's HUD TVs inosanganisira iyo inokatyamadza yeOILED TVs mutsara, inozvikudza huwandu hwezvinhu izvo zvinowedzera kuwedzera iyo cinematic yekuona chiitiko. Dolby Vision ™ IQ inogadzirisa zvine hungwaru marongero emifananidzo zvichienderana nemhando yemukati uye ambient mwenje mamiriro, zvichiita kuti pave nemhando yemifananidzo yefirimu rega rega uye nharaunda yese. Kune ruzha rwepamusoro, Dolby Atoms® inogonesa yakadzama yakatenderedza iyo inobatsira kutsvaira vataridzi mune chero chavanenge vachiona.